Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Dalxiiska ayaa si dhif ah u xoqay dusha sare ee suurtogalnimadiisa
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Investments • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xitaa iyada oo ay jirto guusha weyn ee dalxiiska Jamaica uu soo maray ka hor masiibada COVID-19, Wasiirka Dalxiiska Jamaica Hon. Edmund Bartlett wuxuu rumeysan yahay inay kaliya xoqeen dusha sare ee kartida ballaaran ee warshadan.
Waxaa jira fursad ah dhibaatadan coronavirus COVID-19.
In kasta oo saamaynta ba'an ee masiibadu ku yeelatay dhaqaalaha dalxiiska adduunka, maaddaama qorshayaasha la isku daray oo la dejiyay dib-u-dhiska, hadda waa waqtigii ugu habboonaa ee dib loo qiyaasi lahaa warshadaha.
Tani waa fursad lagu abuuri karo badeecad dalxiis oo ammaan ah, loo dhan yahay, adkaysi leh, oo waarta.
Wasiir Bartlett wuxuu ka hadlay shirkii Ururka Maalgashiga Kaladuwan ee Kariibiyaanka (CARAIA) oo lagu qabtay Hotel AC oo Marriott oo ku yaal New Kingston, Jamaica, maanta, July 29, 2021. Akhri - ama dhegayso - wuxuu lahaa.
Dalxiisku waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn uguna dhaqsaha badan adduunka, oo horseedaya horumarka dhaqan-dhaqaale, kobcinta maalgashiga, shaqo abuurka, iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Lambarada ka horeeya masiibada ayaa sheekada sheegeysa. Sanadka 2019, socdaal iyo dalxiis caalami ah oo kobcaya ayaa lagu qiyaasay 10.4% GDP -ga adduunka wuxuuna taageeray hab -nololeedka 334 milyan oo qof (10.6% dhammaan shaqooyinka). Dhanka kale, qarashka booqdaha caalamiga ah ayaa gaaray US $ 1.7 tiriliyan.
Gobol ahaan, meelaha loo tago Caribbean -ka waxay heleen qiyaastii 32.0 milyan oo dalxiisayaal caalami ah, kuwaas oo ku dhawaad ​​US $ 59 bilyan oo doollar ku deeqay GDP -ga quruumaha, US $ 35.7 bilyan qarashka booqdayaasha, waxayna taageertay 2.8 milyan oo shaqooyin ah (15.2% wadarta shaqada).
Intii maxalliga ahayd, 2019 waxay ahayd sannad rikoor-jabis ah oo loogu talagalay imaatinka dalxiiska iyo dakhliga. Waxaan soo dhaweynay 4.2 milyan oo soo -booqdeyaal ah, waaxdu waxay kasbatay US $ 3.7 bilyan, waxay ku biirisay 9.8% GDP -ga qaranka, waxay ka dhigan tahay 17.0% Maalgashiga Tooska ah ee Dibadda (FDI) waxayna abuurtay ilaa 170,000 shaqooyin toos ah halka ay si dadban u saameysay 100,000 kale.
Dhibaatada ka hor, dalxiiska ayaa sidoo kale horseeday dhismaha 15%, 10% bangiyada iyo maaliyadda, 20% wax-soo-saarka iyo 21% tas-hiilaadka iyo sidoo kale beeraha iyo kalluumeysiga. Guud ahaan, waaxda dalxiiska ayaa korodhay 36% 30 -kii sano ee la soo dhaafay marka loo eego guud ahaan kobaca dhaqaalaha 10%.
Markaad ku darto in Jamaica ay ku taal Kariibiyaanka, oo ah gobolka ugu badan ee dalxiiska ku tiirsan, markaa waad fahmi kartaa muhiimadda ay dalxiiska u leedahay Jamaicadib u soo kabashada dhaqaale ee baahsan kadib.
Maalgashiga dalxiiska ayaa siinaya mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan Jamaica si ay uga soo kabato oo u xoojiso dhaqaalaheeda. Sidaa darteed, waxaan ku faraxsanahay in la igu casuumay inaan la hadlo wakiillada Ururka Maalgashiga Kariibiyaanka ee Kale (CARAIA) maanta si aan u sahamino fursadaha maalgashiga dalxiiska oo kicin doona kobaca warshadaha oo si aan la qiyaasi karin uga qaybqaata wanaagga bulshada iyo dhaqaalaha dadkeenna .